Global Voices teny Malagasy » Tantaram-Pitiavana Tsy Misy Oroka? Izany No Sinema Any Iran · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Febroary 2014 5:15 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Zavakanto & Kolontsaina
Leila Hatami sy Peyman Moadi ao amin’ “Ny Fisarahana.” Sary: Habib Madjidi/Sony Pictures Classics
Ity Lahatsoatra ity dia tatitra amin'ny onjm-peo avy amin'i Shirin Jaafari  ho an'ny The World nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 13 Febroary 2014 ary navoaka indray noho ny fifanarahana hifampizara votoaty.
Raha tiana aseho any Iran ny sarimihetsika dia tsy maintsy manaraka amin'ny fomba hentitra ny lalàna islamika ny tale.
Tsy mahazo mifampikasika ny mpilalao lehilahy sy ny mpilalao vehivavy. Tsy maintsy manarona ny volony mandritra ny fotoana rehetra ny vehivavy.
“Azonao eritreretina ve ny hamaroan'ny tantara tsy hainao ny manambara azy amn'ny mahampamokatra sarimihetsika anao rehefa tsy azonao atao ny mampikasoka ny lahy sy ny vavy?” hoy ny fanontanian'i Jamsheed Akrami , tale Iraniana iray monina any Etazonia.
Nandany dimy taona i Akrami hifampitafatafana amin'ny mpamokatra sarimihetsika sy mpiantsehatra Iraniana ampolony. Ny Vokatra dia ao amin'ny lahatsarim-panadihadiana navoakany farany: “Sinemàn'ny Tsy Fahafahampo.”
Mitaraina amin'ny fahasarotana tsy maintsy atrehiny avokoa izy rehetra amin'ny fomba filazana tantara iray ao amin'ny sarimihetsika tsy maintsy anarahan'izy ireo ny fitsipika Islamika.
“Tsy eo amin'ny resaka fiarahan'olondroa ihany no lazaiko, fa hainao ihany, miresaka toe-draharaha maro tsy ahafahanao mampiseho na dia ny fifampikasoham-pitiavana misy eo amin'ny ray sy ny zanaka vavy na ny tsy fahazoan'ny mpitsabo lehilahy mijery vehivavy marary dia ao anatin'ny resahiko avokoa,” hoy izy nanampy.
Iray amin'ny tale nifampitafatafa amin'i Akrami tao amin'ny fanadihadiany i Bahman Farmanara. Nohazavainy ny fomba nahatongavany amin'ny sehatra iray sarotra tamin'ny sarimihetsika nataony “Oroka Kely.”
“Misy sombiny ao amin'ny “Oroka Kely” rehefa 38 taona tany Soisa ny rainy dia tsy maintsy niverina haingana satria namono tena ny zanany lahy ary tonga izy hamangy ny zanany vavy,” hoy izy. “Eny, miharihary amin'ny lalàna tsy maintsy ankatoavinay, tsy mahazo mifamihina ny lehilahy sy ny vehivavy. Eny fa na dia amin'ny fotoana manokana hoe ray sy zanaka vavy aza.”
Izao ny fomba nanaovan'ny tale izany.
“Inona no nataoko … rehefa niroso nakany amin-drainy ny zanany vavy, dia nanala satroka ny rainy,” hoy i Farmanara. “Izany hoe nanao fihetsika izy hampiato ny zanany tsy hanatona akaiky…”
Nampian'i Farmanara fa Iran dia “firenena izay tsy mifanoroka isika ao anatin'ny sarimihetsika ataonay, tsy mifampikasoka, tsy mifamihina saingy mahagaga fa nitombo avy amin'ny 37 tapitrisa mankany amin'ny 70 tapitrisa isika.”
Maro tokoa ny toe-javatra tahaka izany amin'ny sarimihetsika Iraniana ka raha maro no efa nojerenao dia ho gaga tokoa ianao raha hahita mpiantsehatra mifandray na mandihy ohatra.
Eny mihaika hatrany ny tsipika mena ny mpanatontosa sarimihetsika sy ny mpiantsehatra.
Tao amin'ny sarimihetsika iray antsoina hoe “Gilaneh ,” ny reny iray izay mikarakara ny zanany lahy tsy afa-mihetsika no mampandro azy, mihetsiketsika mihodidina azy ary misy aza fotoana mandihy mba hampakatra ny maoraliny.
Ao amin'ny fanadihadian'i Akrami ny tale Rakhshan Bani Etemad no niteny fa manahy momba ny milina mpanara-maso izy saingy mahatsapa fa tsy maintsy lazaina ny tantara handravana ny fady.
Niteny amin'ny maha-mpanatontosa sarimihetsika Iraniana azy i Akrami “Ny talenta mety hahazoanao loka indrindra dia ny fahafahana miodina amin'ny fitsipiky ny sivana. Fepetra ilaina ambiny ny fanomezana artisitika raha eo amin'ny fanaovana sarimihetsika any Iran.”
Saingy na misy aza ireo sakantsakana rehetra ireo, dia efa nandray anjara tamin'ny fetibe manerana izao tontolo izao ny sarimihetsika Iraniana. Ary mahazo fankatoavana ry zareo.
Tamin'ny 2012, ohatra, tafiditra amin'ny tantara i Asghar Farhadi rehefa nahazo Oscar  tamin'ny filmany “A Separation [Fisarahana] .”
Maro ny sarimihetsika hafa no efa nahazo loka iraisampirenena.
Mandritra izany fotoana izany i Mahdi Kouhian, mpanatontosa sarimihetsika fanadihadiana any Iran, niteny fa nihatsara kokoa ny ambiansy hatramin'ny nahalany ho filohan'i Iran an'i Hassan Rouhani.
Ohatra, nilaza izy fa sambany nanatrika ny Fetiben'ny Sarimihetsika Fajr  tao anatin'ny efa-taona.
Tontosaina isan-taona isaky ny tsingerintaonan'ny Revolisiona Islamika ny fetibe.
Fa tsy be fanantenana toy izany ny mpanatontosa sarimihetsika Akrami. Izany no lazainy satria tsy mahita fiovana hatrany ifotony izy.
“Ny fahalanian'Atoa Rouhani, ho ahy, dia fiovana an-kosotra fotsiny. Tahaka ny manamboatra ny tarehin'ny biby ratsy endrika, izay tsy hanova ny natiora mahabiby ratsy endrika azy akory. Mbola biby ratsy endrika (monstre) ihany no ho hitanao,” hoy izy.
Ny mampalahelo azy indrindra, ho azy, dia tsy mbola nahavita ny sarimihetsika tsara indrindra ihany ny sinema Iraniana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/02/16/57794/
 tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2014-02-13/how-do-you-tell-story-film-if-your-characters-can-t-touch-kiss-or-embrace
 nahazo Oscar: http://www.reuters.com/article/2012/02/27/us-oscars-aseparation-idUSTRE81Q06X20120227
 A Separation [Fisarahana]: http://www.sonyclassics.com/aseparation/
 Fetiben'ny Sarimihetsika Fajr: http://www.fajrfilmfestival.com/?p=en